LG gbatịrị akwụkwọ ikike nke LG G6 ruo afọ 2 | Gam akporosis
LG na-agbatị ikike nke G6 ruo afọ 2
Elvis bucatariu | | LG
LG G6 mere nke mbụ na 2017 World Congress Congress Kemgbe ahụ ọ natawo oke ngosi nke nyocha dị mma sitere n'aka ndị ahịa na ndị ọkachamara ụlọ ọrụ. N'agbanyeghị na ọ nwere ezigbo aha karịa ụdị ndị gara aga (Ọ dị onye na-echeta nsogbu nke LG G4 bootloop?), Ọ dị ka ụlọ ọrụ anaghị ekpochapụ nsogbu na LG G6 ma chee na ya ga-akwụghachi ndị ahịa ya ụgwọ maka ịhọrọ G6 karịa ngwaọrụ ndị ọzọ na-asọ mpi, dị ka Galaxy S8 ma ọ bụ HTC U11.
N'ụzọ dị otú a, ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara na ọ ga-enye akwụkwọ ikike nke afọ abụọ n'okpuru usoro ihe omume ahụNke Afọ Nke Abụọ”Nye ndị ọhụụ niile ma ọ bụ ndị nwe ụlọ LG G6. Agbanyeghị, ọ bụghị ihe niile bụ ọla edo na onyinye ọhụụ a nke LG nwekwara enweghị ọghọm ya.
Nnukwu nkwụsịtụ niile bụ ma eleghị anya eziokwu ahụ Mgbatị nke akwụkwọ ikike nke LG G6 ga-emetụta ndị ọrụ nọ na United States naanị. N'oge LG ekwupụtaghị ihe ọ bụla gbasara nnweta mmemme na mba ndị ọzọ, anyị chere na ọ nweghị atụmatụ ime ya, nke a bụ ihe ihere na-atụle na e nwere ọtụtụ ndị ọrụ nke G6 ma Spain na mba ndị ọzọ. na Europe, Eshia na mpaghara ndị ọzọ.
LG weghaara nnukwu nsogbu a, LG kwuru na ndị ọrụ G6 nwere ikike ga-enweta otu ụdị mkpuchi na ọnwa 13-24N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ ga-anọchi ekwentị mkpanaaka na-enweghị ntụpọ n'ime oge kachasị nke ụbọchị abụọ. Otú ọ dị, a pụrụ iji ihe ndị ọhụrụ ma ọ bụ rụzigharịa ihe ndị dị otú ahụ dochie anya.
Iji rite uru na akwụkwọ ikike agbatiri maka LG G6, ndị nwe ekwentị ga-enwerịrị debanye aha na ibe a. Ọzọkwa, ndị na-adịbeghị anya zụtara G6 ọhụrụ, nwere Ụbọchị 90 n'aka gị ịdebanye aha ngwaahịa iji gbasaa akwụkwọ ikike ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG na-agbatị ikike nke G6 ruo afọ 2
Onye na-agụ ya dijo
Kwa ụbọchị ị na-ebipụta akụkọ nzuzu karịa ... ị gaghị amata na na Europe enwere ọnwa 24 nke iwu kwadoro?
Zaghachi na UnLector
A na-egwu egwu ngwa !!
New Chromebooks na-enweta nkwado maka ngwa gam akporo